IBrunswick Iguqulelwe kwiCafe Studio - I-Airbnb
IBrunswick Iguqulelwe kwiCafe Studio
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMelanie And Stephen
UMelanie And Stephen yi-Superhost
Esi situdiyo saqala ubomi baso njengendawo yekhefi yeBrunswick East Cafe edumileyo ecaleni kwayo. Ifumaneka kumgca wetram odwelisiweyo we-96, kukuphosa ilitye ukusuka kwisikhululo sikanomathotholo se-RRR, iLomond Hotel emangalisayo kwaye ijikeleze ikona ukusuka eCERES kunye neMerri Creek.
Le yindawo ebanzi yestudiyo enegumbi lokulala kunye negumbi lokuphumla kunye negumbi lokuhlambela elitofotofo elahlukileyo, esinebhongo ngayo. Yayiyindawo yekhefi kude kube mva nje kwaye siye sazigcina ezinye zezo mpawu. Yindawo ekhululekile kakhulu kwaye iindwendwe ziya kuba nokufikelela kwi-wi-fi ekhawulezayo nethembekileyo (i-NBN), i-smart tv (kulabo abangenazo izixhobo zabo) kunye ne-air conditioning kunye nokufudumeza unyaka wonke.
Indawo yayo ilungile kwiindwendwe ezintsha eMelbourne njengoko sinelizwe elidumileyo le-96 Tram ngaphandle komnyango. Le ndlela yetram ikuluhlu lwelifa lehlabathi, ihamba phakathi kwe-East Brunswick kunye ne-St Kilda Beach, idlula iMyuziyam yaseMelbourne kunye neSakhiwo seMboniso (imizuzu eli-10 yokukhwela itram) kwaye ecaleni kwendlela yokuthenga yesixeko i-Bourke Street kunye nentliziyo ye-CBD. Ukuya nokubuya esixekweni kunye nazo zonke iindawo eziphambili zemidlalo nomculo/ubugcisa kulula kwaye kuyakhawuleza.
Okokugqibela, ukuba ubuyonwabile kukuzipholela nje, usecaleni kweyona ndawo ilungileyo yokutyela eMelbourne ukuze ube nesonqena, isiqalo esihle ukuya kusasa ngoMgqibelo okanye ekuseni kakhulu phakathi evekini ngaphambi kokuba uye kuzibonela eMelbourne. Ngapha koko, kukho iikhefi ezi-4 ezinkulu ngaphakathi kohambo lomzuzu-iMilkwood, iNew Day Rising, uPope Joan kunye neCERES café. Yonke ikofu enkulu.
Ukugqiba, siyayithanda indawo yestudiyo yethu kwaye siqinisekile ukuba iya kuba yeyona ndawo ifanelekileyo yokuba ube nesiseko sasekhaya kuhambo lwakho kwaye ufumanise konke esi sixeko simangalisayo sinokukunikeza; ngenye indlela, yeyona ndawo ifanelekileyo yokuba uzipholele kwaye ukonwabele intliziyo yehip yesixeko sangaphakathi esisemantla - iBrunswick East.
Isitudiyo sethu sikwintliziyo exakekileyo nedlamkileyo yehip kunye ne-arty engaphakathi emantla eMelbourne. Ngaphandle kwale moniker, ikwanokuzingca ngomxube osempilweni wamakhaya osapho asele imisiwe kunye nentsha, indawo yokuhlala yohlobo lwemizi-mveliso. Yomibini yeenkcubeko ezininzi kunye ne-bohemian kunye nenxalenye yeMelbourne endala. Nangona sele kukhankanyiwe, sijikelezwe ziikhefi ezinkulu kwaye ngaphaya kwendlela ukusuka kwisikhululo sikanomathotholo saseMelbourne's 3RRR kunye nenye yeepayinti ezilungileyo zeGuinness eMelbourne kwihotele iLomond. Inomboniso ophilayo wobugcisa kunye nomculo oneebhari ezininzi ezinkulu kunye nee-pubs kumgama wokuhamba.
I-CERES yipaki yokusingqongileyo ebekwe kwiindonga zeMerri Creek egxile ekuphuhliseni nasekukhuthazeni ubomi obuzinzileyo. I-CERES inekhefi enkulu kwaye ibamba intengiso yamafama rhoqo kunye neminyhadala yomculo. O, kwaye baneenkukhu. Kwaye, ungakha eyakho ibhayisekile kwishedi yebhayisekile esetyenzisiweyo ukuba uziva uluncedo!
Sihamba ngemizuzu engama-20 ukusuka eNorthcote High Street (empuma), kwaye, ukuya ngasentshona, ukuhamba ngomzuzu we-10 ukuya eLygon Street kunye nemizuzu engama-20 ukuya eSydney Road. Kukwakho iindlela zokhetho lwezithuthi zikawonke-wonke kuzo zonke ezi ndawo (ekubonakala ukuba zikhawuleza kakhulu!). Jonga eli candelo lingezantsi ngeenkcukacha.
Siyayithanda indawo esihlala kuyo kwaye singathanda ukuba nawe uve.
Umbuki zindwendwe ngu- Melanie And Stephen
We live with our seven and a half year old son in a house we built just outside the CBD of Melbourne. We love living where we live - with cafes, parks and live music venues all around. However, we really love just to relax and read and hang out at home. East Brunswick is a very special place in a very special city.
We live with our seven and a half year old son in a house we built just outside the CBD of Melbourne. We love living where we live - with cafes, parks and live music venues all aro…
Sihlala kwindlu enkulu kwaye siya kubakho ukunceda nanini na xa uyifuna. Nangona kunjalo, siya kuxakeka ngokuza kwaye sihamba kwaye sifuna iindwendwe zethu zive ukuba 'zinephiko' elahlukileyo lendlu elingaqhagamshelwanga kwindawo yokuhlala ephambili (ngaphandle kokuba bafuna uncedo ngento ethile okanye bancede ukuqonda ubunzima be-MYKI. inkqubo yetikiti yetram!!). Silapha xa, kwaye ukuba, usidinga.
Sihlala kwindlu enkulu kwaye siya kubakho ukunceda nanini na xa uyifuna. Nangona kunjalo, siya kuxakeka ngokuza kwaye sihamba kwaye sifuna iindwendwe zethu zive ukuba 'zinephiko' e…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Brunswick East